Iqembu Lezimvu Club
I-PSC iqoqo le-10,000 Party Sheep NFTs—iqoqo eliyingqayizivele ledijithali elihlala ku-Ethereum blockchain.
I-Party Sheep yakho iphinda kabili njengekhadi lakho lobulungu Beqembu futhi inikeza ukufinyelela ezinzuzweni zamalungu kuphela.
Umphakathi ungavula izindawo zesikhathi esizayo kanye nezinzuzo ngokwenza kusebenze imephu yomgwaqo.
Wake wafisa sengathi ngabe unabangane abangu-10,000? Bese uthola ithikithi lokuya ephathini. 10,000 ama-NFT ahlukile.
Nokho, ungaba nabangu-20 kuphela ngesikhathi.Iphrojekthi ye-Sheep Party yethulwe ngabakwa-WeChain, Inc.
1. Amalungelo obunikazi nawokusebenzisa ezentengiso we-NFT anikezwe abathengi
2. Amathokheni e-Party Sheep angavamile cishe ayi-10,000
3 . Mema ephathini engaxhunyiwe ku-inthanethi, ube isakhamuzi se-metaverse.
4 . inani lengezwe ngokwenza umdwebo womgwaqo usebenze.
Isiteshi esiyimfihlo sokungaboni ngaso linye sizotholakala kubanikazi bezimvu kuphela.
Ingoma yokuqala izotholakala esiteshini sethu se-YouTube.
Amathonsi emoyeni angu-5 kuMbambi Wezimvu ongahleliwe.
I-Buffet ivuliwe futhi wonke umuntu umenyiwe. Abanikazi bezimvu bayafaneleka ukubamba iqhaza kuhlelo oluklomelisa ukuzibandakanya komphakathi.
Sizoduna isikrini esikhulu edolobheni elikhulu.
Sihlela ukudayisa izimpahla ezisemthethweni.
Thenga indawo enkulu e-Metaverse futhi uqale ukwakha i-Sheepland.
I-Roadmap 2.0 enamandla kakhulu izokhishwa.
Ukuze uthenge ama-NFT e-Party Sheep Club, kufanele uqale uthenge i-Ethereum, etholakala nge-Coinbase ne-PayPal. Ukusuka lapho, ungadlulisela i-Ethereum osanda kuyithenga esikhwameni sakho se-MetaMask ukuze uthenge i-NFT yakho yokuqala. Isifundo esinemininingwane eminingi sichazwa yi-YouTube yethu ngesiNgisi nangesiJapane .
I-NFT imele “ithokheni elingafungi” futhi ibhekisela entweni yedijithali eyingqayizivele umsebenzisi angayithenga, abe nayo, futhi ayihwebe. Umsebenzi oyinhloko wama-NFTs ukubukeka kahle njengobuciko bedijithali. Noma kunjalo, ezinye zazo ziphinde zibe nezinto ezengeziwe eziwusizo, njengokufinyelela okukhethekile kumawebhusayithi nokubamba iqhaza emicimbini. Umsebenzi oyinhloko we-NFT ukubukeka kahle njengocezu lobuciko bedijithali. Noma kunjalo, ezinye zazo zinokusebenza okwengeziwe njengokufinyelela okukhethekile kuwebhusayithi, ukubamba iqhaza emicimbini, njll. Zifana nemisebenzi yobuciko engavamile engasebenza “njengekhadi lelungu.”
I-Metamask isikhwama se-crypto esingagcina i-Ethereum futhi kufanele sithenge futhi sihlanganise Izimvu Zeqembu. Uma unesikhwama semali, uzonikezwa ikheli le-Ethereum (isb, 0xABCD… .1234) eligcinwe kuma-NFT akho. Sicela uvakashele ukuze uthole ulwazi olwengeziwe nge-Metamask nokuthi kulula kangakanani ukuyisebenzisa! https://metamask.io/
I-NFT ayigcini nje ngokuhlanganisa abalingiswa abaklanywe kahle nabahlukile, kodwa futhi iza nobulungu be-Party Sheep Club. Sithemba ukuthi uzowujabulela umculo, imicimbi, ama-avatar avela ku-Metaverse, nezinye izici eziningi.Zonke izithombe ze-NFT zigcinwe kuseva ye-ipfs futhi zingabukwa.
Ingakanani imali yobulungu be-Party Sheep Club?
Zonke izintengo ze-Party Sheep Club ziyi-ETH + gas. Ubulungu buzonikezwa inqobo nje uma ubambe ama-NFT; uma sekuthengiswe wonke ama-NFT angu-10,000, imakethe izonquma intengo kumapulatifomu ezinkampani zangaphandle njenge-OpenSea.
I-NFT izokhishwa ngaluphi uchungechunge?
I-Ethereum njengezinga lethokheni le-ERC-721.
Ngilujoyina kanjani Uhlu Lwabaphathi ngemva kokuthenga kwami?
Ngemva kokuthenga imvu, vele ujoyine i-Discord futhi uqinisekise njengomnikazi ukuze uthole izinzuzo zokuba Izimvu Zephathi EKlabhuni Yezimvu Zephathi.
Ngitholani ngokuba umnikazi?
Uzothola izipho ze-NFT, ukufinyelela ku-Party Sheep Club Land ku-Sandbox Metaverse, ama-NFT amahhala ephrojekthi elandelayo ezokwethulwa maduze, kanye nazo zonke izinzuzo ze-Roadmap 2.0.
Sizomaketha ngokugcwele iphrojekthi yethu ngisho nangemva kokuba isidayiswe yaphela. Lokhu kungenxa yokuthi siyawukhathalela umphakathi kanye nokutshalwa kwezimali kwawo.
Sinqume ukwethula isikhwama somphakathi ku-Party Sheep Club.Ukuhumusha kwesi-Japanese lapha .
Ngingenzani nge-Party Sheep NFT?
Ukhululekile ukwenza noma yini oyifunayo ngaphansi kwelayisensi engakhethekile.
ISIVUMELWANO ESIQINISEKISIWE SOKUSEBENZA: 0x53DCC7Ed91F911058033071D50f527A964889e24
ISIVUMELWANO ESIQINISEKISIWE SOKUSEBENZA: 0xE9a4f318b12c890cA93b1Da0140394030672B0AD
Ingabe i-Party Sheep Club iyi-investimenti enhle?
Lokho ekugcineni kukuwe ukuthi unqume. Sikholelwa ukuthi i-Party Sheep Club izoba khona isikhathi eside futhi kuwumsebenzi ozohlala ukhula futhi uthuthuka. Nokho, impumelelo ye-Party Sheep Club incike ezintweni eziningi nokuguquguquka okungekho owazi ngokuqinisekile. Ngethemba, i-Party Sheep Club izoya enyangeni, kodwa njenganoma yini, ungachithi imali ongeke ukwazi ukuba nayo.